DEG-DEG: Kooxdii Ugu Horreysay Ee Weyn Oo Si Buuxda U Shaacisay Go'aanka Ay Kaga Soo Horjeedo European Super League - Laacib
HomeWararka Champions LeagueDEG-DEG: Kooxdii Ugu Horreysay Ee Weyn Oo Si Buuxda U Shaacisay Go’aanka Ay Kaga Soo Horjeedo European Super League
DEG-DEG: Kooxdii Ugu Horreysay Ee Weyn Oo Si Buuxda U Shaacisay Go’aanka Ay Kaga Soo Horjeedo European Super League
April 19, 2021 admin Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda ree Germany ee Borussia Dortmund ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee weyn ee si rasmi ah u shaacisa go’aanka ay kaga soo horjeedo tartanka ay qaar kamida kooxaha ugu waaweyn Yurub samaysanayaan ee European Super League loogu magac daray.
12 kamida kooxaha ugu waaweyn Yurub ayaa dhawaan shaaciyay inay ku biirayaan tartan cusub oo iyaga u dhaxayn doona kaas oo lacagaha iyo dhaqaalaha kasoo gala ay kaligood kala qaybsanayaan taas oo lid ku ah xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA.
Saddexda kooxood ee waaweyn ee ilaa hadda laga tabayo tartankaas ayaa kala ah Borussia Dortmund, Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain oo warar kala duwan laga sheegayo sababta ay qayb uga noqon waayeen ESL.
Wararka qaar ayaa xusaya in kooxaha horyaalada Bundesliga iyo Ligue 1 loo diiday inay marka hore qayb ka noqdaan European Super League halka ay xogo kale tibaaxayaan inay iyagu diideen oo ay daacad u yihiin UEFA.
Haddaba, madaxa fulinta Borussia Dortmund ee Hans Joachim Watzke ayaa sheegay in kooxdoodu ay diiday tartankaas cusub ee kooxaha waaweyni isku urursadeen.
“Kooxuhu waxay doonayaan inay fuliyaan dib u habaynta qorshaysan ee UEFA Champions League, qorshaha lagu asaasayo Super League waa la diiday” ayuu yidhi Watzke.